पार्टी एकता : यी हुन् टुंगिन बाँकी तीन विषय,सूर्य कि सूर्यभित्र हँसिया–हथौडा ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
पार्टी एकता : यी हुन् टुंगिन बाँकी तीन विषय,सूर्य कि सूर्यभित्र हँसिया–हथौडा ?
काठमाडौं । एमाले र माओवादी एकीकरणपछि बन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधान मस्यौदा तयार भएको छ । दुई अध्यक्षले आलोपालो प्रणालीबाट एकीकृत पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्ने गरी २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने विधान मस्यौदा तयार भएको हो, नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ ।